Daawo Sawirada Xeebta Liido oo dhismayaal laga hirgelinayo iyo damaashaadka Jimcaha – idalenews.com
Daawo Sawirada Xeebta Liido oo dhismayaal laga hirgelinayo iyo damaashaadka Jimcaha
Xeebta Liido ayaa waxaa xilligan ka socda dhismayaal laga hirgelinayo, iyadoo maalinta jimcaha ay tahay maalinta ugu badan ee loo dalxiis tago, halkaasoo ay ku kulmaan dhalinyaro ka kala yimaada 16-ka degmo ee Gobolka Banaadir iyo dad ka yimid qurbaha.
Maalinta jimcaha oo ah maalin fasax ah ayaa waxaa Xeebta isugu yimaada dhalinyaro u soo dabaal taga xeebta, kuwaasoo ah ciyaal xaafadeed isku balasada Kubada Cagta, iyo waalidiin caruurtooda wata oo dabaal siiya.
Waxaa Xeebta lagu iibiya, Jalaatada, cabitaanada iyowaxyaabaha mac-macaanka sida Sambuuska, kuwaasoo ay iibsadaan dhalinyarada xeebta u soo dabaal taga.
Laakiin muuqaalka indhahaaga uu soo jiidanayo ayaa ah dhismayaal casri ah oo isugu jiro guryo la dego, Hotelo iyo Maqaaxi la doonayo in laga furo xeebta dhinaceeda, waxaana xilligan uu sare u kac xoogan uu ku yimid qiimaha dhulka ee la iibsado ee ku yaala hareerta Xeebta.
Hadaba Jowhar.com oo maanta oo jimco booqatay Xeebta ayaa waxay idinku soo gudbineysa Sawiro aan ka soo qaadnay xeebta.
Saraakiisha Milateriga Soomaaliya oo ku hanjabay inay qabsanayaan degmada Diinsoor
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo si kulul uga soo horjeestay Shirka kafurmay Kismaayo